Agatha Christie: zvinyorwa zvekuda kuziva zveGreat Lady yeChipara. | Zvazvino Zvinyorwa
Agatha Christie: Mitambo yake ndeyechitatu-inotengesa zvakanyanya munhoroondo, kumashure kweBhaibheri naShakespeare.
Agatha Christie mabasa atengesa makopi anopfuura mabhiriyoni maviri , ndakamira mu chinzvimbo chechitatu chemabhuku anotengesa zvakanyanya pasirese, zve chete kumashure yemabasa kubva kuShakespeare neBhaibheri.
Gumi maNigritos ndiyo yakanyanya-kutengeswa chakavanzika nhoroondo yenguva dzese uye imwe yemanoveli ake, Kuuraya kwaRoger Ackroyd, akavhoterwa yakanakisa nhoroondo yekuparwa kwemhosva nguva dzese neCrime Writers Association..
1 Kutanga mumabhuku:
2 Urongwa hwechokwadi:
3 Basa rakakura rekunyora:
4 Agatha Christie nevanhu vake:
Hunhu hwekutanga Agatha Christie akagadzirwa aive Poirot, mutikitivha wake ane mukurumbira, uye akazviita munhoroondo yake yekutanga, Iyo isinganzwisisike kesi ye StylesAsi kunyangwe iye Mukadzi Mukuru weKupara mhosva haana kuenda kune nyore kutanga mune yakaoma mabhuku nyika: vaparidzi vatanhatu vakaramba novel. Paakavaita kuti vabheje paari, vanoisa imwe yemamiriro ezvinhu anonyanya kukanganisa munyori: kuti agadzirise magumo.
Vatsoropodzi vakamupa rimwe rerime uye rimwe jecha:
"Kukanganisa chete munyaya iyi ndeyekuti inenge yakangwara zvikuru."
Era yekutanga nyaya yemutikitivha umo muverengi aisazokwanisa kuwana tsotsi
Zvakaitika kwaari semukoti uye semubatsiri wemishonga zvakamupa ruzivo nezve zvinodhaka uye chepfu iyo yaakashandisa mumanovel ake. Unyanzvi hwake pachinhu ichi hwaive hwakakwira zvekuti kurondedzerwa kwethallium chepfu, iyo yaanogadzira Chakavanzika cheHuru Horse (1961) yakanga yakanyatsojeka zvekuti zvinoshamisa akabatsira kugadzirisa nyaya yekurapa izvo zvainetsa kune nyanzvi.
Imwe yeakanyanya hunhu enhoroondo dzaAgatha Christie ndeyekuti inosiya makwanisi akakwana muzvitsauko zvese kuti muverengi awane mhondi isati yapera. Iyi nzira yekunyora kana ruzivo runodaidzwa whodunit (De Ndiani anozviita?).
Basa rakakura rekunyora:
Agatha Christie akatumira Makumi matanhatu nenomwe ematsotsi pamusoro pekutamba, nhanhatu dzerudo zvinyorwa, zvipfupi nyaya, mbiri nhoroondo, uye mabhuku maviri enhetembo.
Kutamba kwake Iyo Mousetrap Iyo ndiyo yekureba kumhanya show munyika.
ari nhanhatu dzerudo akazviburitsa pasi pezita rekunyepedzera Mary Westmacott.
Poirot, ruzhinji rwunodisisa hunhu, uyo musiki wake chaakawana "chisingakundike."
Agatha Christie nevanhu vake:
Makore makumi maviri chete mushure mekugadzira Poirot, akareurura kudhayari rake kuti akariwana "haigone". Kunyangwe izvi, akazvipira kuvaverengi vake uye akaramba achinyora zvinyorwa pamwe naPoirot sem protagonist pasina kudzikisa mhando yavo iota. Akaenderera mamwe makore makumi matatu aine nyenyedzi hunhu hwake, aine budiriro yakadaro Poirot ndiye ega munhu wekunyepedzera kuve neake obituary. muThe New York Times mushure mekuonekwa kwake kwekupedzisira (Keteni, 1975)
Vatambi vayo vaviri vakuru havana kumbosangana. Jamas Poirot naMiss Marple vakasangana mune imwecheteyo nhoroondo.
"Ndine chokwadi kuti havadi kusangana"
akadaro kamwe, uye kana tikazvifunga, aitaura chokwadi. Vakanga vasiri hunhu huviri hwaida kufambidzana.
Chero zvazvingaitika, pamwe chete kana zvakasiyana, zvakakodzera kuti uverenge zvekare rimwe nerimwe rezviitiko zvavo, pasina kuregeredza avo vane nyeredzi Tommy naTuppence, Parker Pine kana vatambi vaingorarama panguva yenyaya, senge protagonist yeimwe yenyaya dzangu dzinodakadza, Husiku Husingaperi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Agatha Christie: zvinyorwa zvekuda kuziva zveGreat Lady yeChipara.